Faysal Rooble: “Itoobiya waxa ay u soo xeydatey hubinta kalajabka Soomaaliya in uu taam noqdo” – Radio Daljir
Maarso 12, 2018 1:43 b 0
Qoraa sare Faysal Rooble oo kamid ah dadka sida weyn wax uga qora arrimaha Geeska Afrika iyo kuwa caalamkaba ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir ku sheegay in heshiiska Dekedda Berbera uusan ahayn heshiis ganacsi, balse dawladaha Imaaraadka iyo Itoobiya ay ka leeyihiin dano kale oo qarsoon.
Dhanka danaha Itoobiya, ka sokow hubinta kalajabka Soomaaliya, Md. Faysal Rooble waxaa kale oo uu shaaciyey in saamiga 19% ee Itoobiya ay sheegatay in ay ku leedahay Dekedda Berbera in uu hadda muujinayo, ayna soo shaacbaxayso, in Itoobiya ay u soo tafaxeydatay majaxaabinta dowladda Soomaaliya.
Md. Faysal Rooble ayaa raacshay in macnaha kale ee ku duugan 19% uu yahay in Itoobiya ay tahay damaanaddii heshiiska Dekedda Berbera si aysan u dhicin wixii Jabuuti ka dhacay oo kale (Jabuuti waxa ay laheyd 64% Dekedda Dooraleh, meesha DPW ay ka laheyd 36%). Heshiiska Berbera asaga DP World waxa ay leedahay 51%, sidaas darteed waxa ay taasi mataleysaa in haddii xadgudub heshiis yimaado ay Itoobiya damaanad ka tahay, oo la isticmaali karo ciidamadeeda, say rabtana ka yeeli karto sugidda amniga iyo waliba fulinta danaha Itoobiya iyo kuwa Imaaraadka ee gobolka. Taas macnaha kale ee ku duugan baa waxa uu yahay in Somaliland markii la rabo la dhihi karo socda, illeen awood maleh, aftina warkeeda daa.
Faysal ayaa heshiiska ku tilmaamay mid meel-ka-dhac ku ah qaranimada Soomaaliya, isaga oo talooyin wax-ku-ool ah u soojeediyey dawladda iyo dadka Somaliyeed.
Md. Faysal Rooble waxa uu u warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman” oo ku sugan istudiyaheena Daljir Bossaso.
Qoraal kale oo la xiriira danaha Itoobiya ee dalka Soomaaliya iyo kala-qoqobka Soomaalida